Si Wanaagsan Ugu Maamul Dhacdooyinka Jadwalka Dhacdooyinka Casriga ah | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Si Wanaagsan Ugu Maamul Dhacdooyinka Jadwalka Dhacdooyinka Casriga ah
Si Wanaagsan Ugu Maamul Dhacdooyinka Jadwalka Dhacdooyinka Casriga ah
Waxaan u maleynayaa inaad aqbali doonto markaan idhaahdo: socodsiinta mareegaha dhacdooyinka waa hawl adag. Waa inaad abuurtaa dhacdooyin, ku daabac isla mareegtaada, oo aad diiwaan geliso ka qaybgalayaasha adoon khalkhal gelinayn. Markaad la shaqeyneyso doorsoomayaal sida waqtiyo kala duwan, qiimayaal, iyo goobo munaasabado kala duwan, hawshu waxay noqotaa 10X adag.
Waxaa soo baxday; waxaad si sahlan u abuuri kartaa nidaamka maaraynta dhacdooyinka goobtaada adoo isticmaalaya plugin Calendar Events Modern. Iyo dib u eegista/sida loo dhajiyo maanta, waxaan ku tusineynaa sababta saxda ah ee dhacdooyinka Casriga ah ee Jadwalka dhacdooyinka waa mid ka mid ah pluginsyada ugu wanaagsan ee dhacdada WordPress si loogu faa'ideeyo shabakada.
Akhri si aad u ogaato sifooyinka iyo fursadaha ka dhigaya plugin kalandarka Dhacdooyinka Casriga ah inay ka soocaan dadka. Ha ilaawin inaad hubiso videos qabow Waxaan ku daray dhamaadkii maqaalka. Wixii intaas ka baxsan, fadlan la wadaag fikradahaaga faallooyinka. Taasi waa ka baxsan tahay, aynu u dhaadhacno ganacsiga.
Waa maxay Jadwalka Dhacdooyinka Casriga ah?
Macluumaad & Soo dejiso Arag Bandhigga
Jadwalka Dhacdooyinka Casriga ah waa plugin cajiib ah oo kaa caawinaya inaad abuurto, daabacdo, oo aad ku maamusho dhacdooyinka degelkaaga WordPress. Waa maskaxdii kooxda Webnus, mawduuc WordPress ah oo la ixtiraamo, iyo horumariye plugin. Plugin-ku wuxuu ka kooban yahay dhammaan sifooyinka aad u baahan tahay si aad u maamusho dhacdooyinka boggaaga WordPress sida pro.
Iyo sida magacu soo jeedinayo, Jadwalka Dhacdooyinka Casriga ah wuxuu ku siinayaa hababkii ugu dambeeyay ee naqshadaynta iyo hab wax ku ool ah oo loo maareeyo dhacdooyinka iyada oo aan dhididka jabin. Sidan oo kale, plugin-ku waa u diyaar mobile-ku, si buuxda uga jawaabaya, tarjumaad-diyaar ah, oo si fiican ugu ciyaara qalabka aad jeceshahay, sida WooCommerce, iyo kuwo kale.
Intaa waxaa dheer plugin waa mid si gaar ah u isticmaale-saaxiibtinimo oo si wanaagsan loo qaabeeyey si uu kuu badbaadiyo waqti aad u badan. Halkii aad wakhti ku lumin lahayd habaynta goobaha, waxaad ku dejin kartaa wax walba dhowr jeer oo aad ku dhufatey dhulka orodka. Abuuritaanka iyo maareynta dhacdooyinka MEC waa mid fudud sida A, B, C, uma baahnid qofna inuu gacantaada qabto.
Haddii aad u raadinayso plugin maarayn dhacdooyinka fantastik ah mareegahaaga WordPress, Jadwalka Dhacdooyinka Casriga ah waa heshiiska dhabta ah. Waad ku mahadsan tahay taageerada wakhtiga weyn ee macaamiisha, pluginku wuxuu kaa caawinayaa inaad waqti badbaadiso, lacag iyo inaad bixiso khibrad isticmaale oo weyn boggaaga.
Hadda oo aad ogtahay waxa aanu ku shaqaynayno, waxa aanu ku bilaabi doonaa nooca bilaashka ah ee Jadwalka Dhacdooyinka Casriga ah. Ka dib dib u eegista, waxaan dabooli doonaa PRO version iyo add-ons oo ku siinaya hawlkarnimo dheeraad ah adigoon bangiga jebin. Anagoon lumin ilbiriqsi kale, aan aragno waxa plugin-ku bixiyo marka la eego sifooyinka.
Tilmaamaha Jadwalka Dhacdooyinka Casriga ah
Jadwalka Dhacdooyinka Casriga ah ee plugin waxa uu ku xidhaa feer aad u weyn waaxda sifooyinka. Xitaa nooca bilaashka ah wuxuu kaa dhigayaa inaad ku dhoola caddeyso muuqaal cajiib ah oo ka baxsan waxa plugins tartamaya oo badan ay bixiyaan. Waxaad waqti fiican ku heli doontaa nooca bilaashka ah, laakiin haddii aad doorato inaad cusboonaysiiso, waxaad filan kartaa oo kaliya astaamo awood badan.
Tirada sifooyinku waa mid aad u dheer, laakiin waxaan ku dadaali doonaa inaan soo koobo waxa aad ka filan karto plugin dhacdooyinka WordPress sida mid kale. Ka sokow, waxay u badan tahay inaadan weligaa u baahnayn dhammaan sifooyinka si kastaba, laakiin haddii aad waligaa sameyso, Jadwalka Dhacdooyinka Casriga ah ma niyad jabiyo.
Jadwalka Dhacdooyinka Casriga ah maraakiibta wata sifooyin kala duwan sidaan hoos ku kala soocnay.
Plugin-ku wuxuu la socdaa xulasho wanaagsan oo astaamo ah iyo xulashooyin kuu oggolaanaya inaad si fudud u abuurto noocyo kala duwan oo dhacdo ah. Bilawga, waxaad abuuri kartaa dhacdooyin hal maalin ah, dhacdooyinka maalinta oo dhan, iyo dhacdooyin haya wax ka badan hal maalin.
Intaa waxaa dheer, waxaad u habeyn kartaa dhacdooyinkaaga si ballaaran. Tusaale ahaan, waxaad ku dari kartaa dhacdooyinka Google Calendar, iCal, ama Outlook si aad ugu maamusho dhacdooyinka qalabka aad jeceshahay. Intaa waxaa dheer, waxaad si fudud ugu dari kartaa sawirada, qabanqaabiyeyaasha, ku hadlaayasha, tags, qaybaha, foomamka ballansashada gaarka ah, jadwalada saacadaha, kala duwanaanshaha tigidhada, iyo maabka goobta dhacdooyinkaaga.
Intaa waxaa dheer, waxaad dejin kartaa dhacdooyinka si aad u soo celiso maalmaha caadada ah, tusaale ahaan Isniinta ugu horreysa bil kasta iyo wixii la mid ah. Intaas kuma koobna; waxaad abuuri kartaa dhacdooyin dhacaya maalin kasta, toddobaadle, bille, ama sannadle. Sidoo kale, waxaad abuuri kartaa dhacdooyin aan dhamaanayn, soo bandhigi kartaa dhacdooyin muuqda, dejin kartaa tirinta dhacdooyinka, qarin kartaa wakhtiga dhacdada, ku dar summada dhacdooyinka firfircoon, oo waxaad samayn kartaa wax ka badan.
Midna ha xanaaqin; waxaad heli si aad u aragto inta badan sifooyinka kuwan ficil marka aan tijaabin wadi plugin dambe ee maqaalka. Waqtigan xaadirka ah, aan soo koobno ​​astaamo badan.
Marka la eego soo bandhigida dhacdooyinka shabakadaada, plugin kalandarka Dhacdooyinka Casriga ah maaha mid ka gaaban qaabayn soo jiidasho leh oo aan ka hor imanayn waayo-aragnimada isticmaale. Dhacdooyinkaagu waxay u muuqdaan kuwo fiiqan oo nadiif ah waana la heli karaa in la daawado oo la qabsado. Runtii tani waa war aad u wanaagsan maadaama qaar badan oo ka mid ah dhacdooyinka kale ee plugins ay u baahan yihiin tiro badan oo is-habayn si loo gaaro muuqaal hufan.
Laakin Jadwalka Dhacdooyinka Casriga ah midna ma yeelan doono. Si lagaaga caawiyo inaad ku soo bandhigto dhacdooyinkaaga iftiinka ugu fiican ee suurtogalka ah, pluginku wuxuu la imanayaa harag midabyo badan, karti uu ku dooran karo midabyo gaar ah, Astaamaha Font Awesome, 5 liiska qaababka muuqaalka, 7 qaab muuqaal muuqaal, jadwal buuxa oo muuqaal ah, aragtida ajandaha, muuqaalka dhismaha, dhacdooyinka Khariidadaha Google-ka, goobitaan xooggan oo dhacdo iyo wixi la mid ah.
Markaa haddii aad rabto inaad ku soo bandhigto dhacdooyinkaaga shabaq, liis, carousel, ama modal, kalandarka dhacdooyinka Casriga ah ayaa dhabarkaaga leh. Taageerada RTL buuxda, filtarrada, iyo wax ka badan, dhacdooyinkaagu waxay si fiican ugu eegi doonaan aalado kala duwan. Waxaa dheer, mahadsanid dhammaan xulashooyinka is-beddelka ee aad hesho, waxaad ku toosin kartaa dhacdooyinkaaga astaantaada daqiiqado gudahood.
Abuuritaanka, soo bandhigida, iyo maareynta dhacdooyinka degelkaaga WordPress waa wax wanaagsan iyo wax walba, laakiin ballan-qaadista ka-qaybgalayaasha munaasabadda waa mid aan loo baahnayn. Muxuu macmiilku u arki lahaa faahfaahinta dhacdada degelkaaga oo uu sugo inuu bixiyo marka ay yimaadaan dhacdada?
Miyaanad u malayn inay fiican tahay inaad lacag ku dalacdo dhacdada ka hor intaanay ka qaybgalayaashu ka tagin mareegahaaga? Habkaas, ka-qaybgaluhu wuxuu u baahan yahay oo kaliya inuu soo bandhigo tigidhkiisa munaasabadda. Waxaad kaydisaa waqti, waxaad samaysaa lacag badan, oo waxaad qabataa rajooyin laga yaabo inay si kale u seegtay dhacdadaada.
Jadwalka Dhacdooyinka Casriga ah waxa uu ku siinayaa koox qurux badan oo muuqaalada ballansashada, laakiin kaliya in nooca pro. Waxa aad helaysaa shan albaab oo lacag bixin ah, noocyo tigidh oo kala duwan, kuuboonno, goobo khaas ah, cashuuro, ogeysiisyo, ikhtiyaarka lacagta, liiskuna wuu socdaa.
Marka la eego dhacdooyinka ballansashada, Jadwalka Dhacdooyinka Casriga ah wuxuu ku siinayaa dhammaan sifooyinka aad u baahan tahay si aad si otomaatig ah ugu qabsato boggaaga gebi ahaanba.
Jadwalka Dhacdooyinka Casriga ah waa mid saaxiibtinimo leh. Haddii aad isticmaalayso plugin ama app kale ee dhacdada WordPress, Jadwalka Dhacdooyinka Casriga ahi ma takooro. Waxaad ku dhex dari kartaa plugin-ka kala duwan oo kalandarka dhacdooyinka si aan kala go 'lahayn.
Taas macnaheedu waa inaad si fudud uga soo dhoofsan karto dhacdooyinka plugins iyo adeegyada kale ee WordPress. Marka laga reebo taas, waxaad u dhoofin kartaa dhacdooyinkaaga aaladaha qolo saddexaad si fudud. Intaa waxaa dheer, Jadwalka Dhacdooyinka Casriga ah wuxuu la shaqeeyaa WooCommerce iyo noocyo kala duwan oo bog dhisayaal ah oo ka baxsan sanduuqa.
Plugin waa mid aad u dabacsan, taas oo kuu ogolaanaysa inaad ku socodsiiso dhacdo si toos ah otomaatig ah iyo nidaamka maaraynta ballansashada goobtaada. Laga soo bilaabo abuurista ilaa bandhigista iyo ballansashada dhacdooyinka, Jadwalka Dhacdooyinka Casriga ah ayaa habaynaya socodkaaga shaqada si aad diiradda u saarto kobcinta ganacsigaaga.
Jadwalka Dhacdooyinka Casriga ah wuxuu la jaan qaadayaa plugins SEO, WordPress multi-site, EventOn, The Events Calendar, Calendarize, cache plugins, Google Calendar, iyo Events Schedule WP Plugin, iyo kuwo kale.
Astaamaha Saaxiibtinimada Horumariyaha
Jadwalka Dhacdooyinka Casriga ah waa aaladda ugu fiican ee isticmaalayaasha awooda WordPress, taas oo ay ugu wacan tahay cutubka sifooyinka saaxiibtinimada leh. Bilawga, waxaad burin kartaa boggaga, kaydka, iyo maqaarka midabka mawduucaaga. Intaa waxaa dheer, waxaad dabcin kartaa hawlaha WordPress ee caadada u ah, kala shaandheynta fursadaha plugin, habayn kartaa koodka gaaban, oo aad wax badan u samayn kartaa adigoo isticmaalaya qabsatooyinkooda.
Sida loo rakibo jadwalka dhacdooyinka Casriga ah Lite
Ilaa iyo hadda si fiican ayaanu u tijaabin jirnay biyaha, haddii kaliya ay tahay suulashayada. Waxaa la gaaray waqtigii la qaadan lahaa. Waxba kuma baran karno inaan cidhifyada ku dhegno, markaa aynu quusanno oo aynu khibrad u yeelanno bahalkan. Nooca bilaashka ah ayaa laga heli karaa WordPress plugin repo, marka waad ogtahay in tani ay fududaan doonto.
U soco Plugins> Kudar Cusub, sida hoos ku qoran.
Marka xigta, geli "Calendar Dhacdooyinka Casriga ah" sanduuqa raadinta, ka dibna ku dhufo Ku rakib hadda Badhanka.
Taas ka dib, ku dhufo Guddi badhanka si loo dhamaystiro rakibidda.
Haddii aad sidaa samayso waxay kuu horseedaysaa bogga soo dhawaynta ee Jadwalka Dhacdooyinka Casriga ah ee aad ku aragto sawirka hoose ee ka muuqda.
Laga soo bilaabo sawirka kore, ka fiirso kan cusub ME Kalandarka shayga ku jira liiska maamulka WordPress. Xilligan, waxaad bilaabi kartaa abuurista dhacdooyin.
Abuuritaanka dhacdo cusub iyadoo la adeegsanayo jadwalka dhacdooyinka Casriga ah waa sahlan tahay. U soco ME Kalandarka oo guji Ku dar Dhacdo, sida ka muuqata sawirka hoose.
Samaynta sidaas ayaa kuu horseedaysa tifaftire muuqaal leh, sidaan hoos ku faahfaahnayno.
Ku dar cinwaanka dhacdadaada, sharraxaadda, oo hoos u dhaadhac si aad ugu darto tafaasiil badan oo dhacdo ah sidaan hoos ku muujinayno.
Shaashada sare, waxaad ku dari kartaa dhammaan faahfaahinta dhacdadaada. Waxaad ku dari kartaa goobta, goobta, qabanqaabiyeyaasha, kharashka, jadwal saacadle ah, ku celcelinta dhacdada, sawirka muuqda, iyo wixii la mid ah. Waa dadaal la'aan abuurista dhacdooyin leh plugin kalandarka Dhacdooyinka Casriga ah.
Markaad ku darto dhammaan faahfaahinta aad u baahan tahay, ku dhufo naadiya badhanka si aad dhacdada ugu dhejiso shabakadaada. Waa kan sida dhacdada muunadku u ekaato mareegahayaga imtixaanka.
Waxay u egtahay mid fiican haddii aad i weydiiso 🙂
Si kastaba ha ahaatee, isticmaalayaashu wali ma qabsan karaan dhacdooyinka maadaama aynaan hawlgelin moduleka ballansashada, kaas oo - haddii aad xasuusato - kaliya laga heli karo Jadwalka Dhacdooyinka Casriga ah ee PRO.
Si aad u dhaqaajiso moduleka boosaska ee nooca pro, u gudub ME Calendar> Settings> Boos qabsi, sax Daar moduleka boos celinta sanduuqa hubinta oo dhagsii Keydso Isbedelada badhanka sida hoos ku cad.
In sidaas la yeelo ayaa soo kordhinaysa Lacagaha Bixinta goobaha ballansashada MEC iyo a Boosaska shayga ku jira liiskaaga maamulka WordPress.
Hadda oo aad abuuri karto dhacdo oo aad ku soo bandhigto degelkaaga, aan daboolno Kalandarka Dhacdooyinka Casriga ah Pro iyo add-ons.
Kalandarka Dhacdooyinka Casriga ah ee lagu daro Premium
Haddii aad u baahan tahay sifooyin badan, waxaad had iyo jeer u gubi kartaa jadwalka dhacdooyinka Casriga ah Pro. Webnus waxa uu bixiyaa saddex xidhmo: 1 liisan oo ah $75, shan shati oo ah $255, iyo 10 liisan oo ah $455 doolar.
Dooro qorshaha adiga kuu shaqaynaya, iibso oo soo deji plugin Marka xigta, gal dashboardkaaga maamulka WordPress, oo u gudub Plugins > Kudar Cusub.
on the Ku dar Plugins shaashadda, guji Soo gal Plugin, dooro Kalandarka Dhacdooyinka Casriga ah .zip file oo tag Ku rakib hadda.
Marka xigta, dhaqaaji plugin-ka.
Intaa ka dib, guji ME Kalandarka, hoos u dhaadhac, geli calaamadda iibsashada oo guji Gudbi badhanka sida hoos ku cad.
Hadda oo noocaada qaaliga ah ee Jadwalka Dhacdooyinka Casriga ah uu diyaar yahay, aan sahaminno dhowr waxyaalood oo qiimo leh. Si aad u aragto una rakibto add-ons, u gudub ME Calendar> Addons sida hoos ku qoran.
Haddii kale, waxaad ka soo dejisan kartaa addons-ka akoonkaaga MEC oo waxaad ku rakibi kartaa goobtaada sida plugin caadiga ah. Tababarka, waxaan ku rakibnay dhammaan waxyaabaha lagu daro sababtoo ah aaway madadaalada dib u celinta? 🙂
Aynu ka gudubno wax-ku-kordhinta kalandarka Dhacdooyinka Casriga ah ee qaaliga ah.
Kalandarka Dhacdooyinka Casriga ah ee WooCommerce wax-ku-darku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku iibiso tigidhada dhacdada WooCommerce. Korka iibsiga tigidhada, isticmaalayaashaadu waxay sidoo kale iibsan karaan alaabada kale ee WooCommerce. Si aad u isticmaasho wax-ku-darka is-dhexgalka WooCommerce, waxaad u baahan tahay Kalandarka Dhacdooyinka Casriga ah Pro iyo WooCommerce.
Baro sida loo iibiyo tigidhada munaasabada add-on-ka WooCommerce fiidyaha soo socda:
Dhammaantood waa la sameeyay Hadda waxaad diyaar u tahay inaad rakibto kalandarka dhacdooyinka Casriga ah ee soo socda: Dhismaha Foomka Elementor-ka.
Kordhinta Foomka Dhismaha Elementor
Ku-darka Foomka Dhismaha Elementor-ku wuxuu kaa caawinayaa inaad u abuurto foomam u gaar ah tigidhadaada bogga dhisaha Elementor. Wax-ku-darku waxa uu la socdaa doorashooyin badan oo aad ku abuurto oo aad qaabayso foomamkaaga hadba sidaad rabto.
Si aad u isticmaasho wax-ku-darka, waxaad u baahan tahay Jadwalka Dhacdooyinka Casriga ah ee Pro iyo bogga dhisaha Elementor. Hoos ka daawo muuqaalka gaaban si aad wax badan uga ogaato
Marka xigta, waxaan haysanaa Elementor Single Builder Addon.
Elementor Single Builder Addon wuxuu ku siinayaa sida saxda ah ee aad u baahan tahay si aad u abuurto qaab-qaabaysan-qaabaysan oo loogu talagalay dhacdooyinkaaga Elementor. Addonku wuxuu ku siinayaa fursado badan oo aad ku abuuri karto bogag dhacdo qurux badan kuwaas oo aad u-duper si fudud loogu habayn karo Elementor.
Fiiri fiidiyowga hoose si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida loo rakibo addonka boggaaga WordPress.
Elementor Single Builder Addon jidka ka baxsan, aan u gudubno kan xiga.
Elementor Shortcode Builder Addon wuxuu kuu ogolaanayaa inaad abuurto oo aad habayso koodka gaaban ee MEC ee Elementor-ka. Koodhadhka gaaban waxay kuu oggolaanayaan inaad ku muujiso dhacdooyinkaaga meel kasta oo ka mid ah mareegahaaga. Waxaad si sahal ah u habayn kartaa qaababka, oo aad u tusi kartaa/qari kartaa walxaha kood gaaban oo kala duwan si fudud.
Si aad wax badan u barato, fadlan hoos ka daawo muuqaalka gaaban
Markaa waxaan haynaa Event API Addon.
Dhacdada API Addon
Haddii aad jeclaan lahayd inaad dhacdooyinka ka koobiyayso hal degel oo kale, waxaad gabi ahaanba jeclaan doontaa Event API Addon. Wax-ku-darku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ka daawato dhacdooyinka degelkaaga WordPress codsi kasta oo shabakad ah ama madal kasta. Waa aaladda ugu fiican ee lagu kala wareejin karo dhacdooyinka u dhexeeya codsiyada adiga oo aan aqoon codayn
Hoos ka daawo muuqaalka oo kooban
Marka xigta, Multisite Event Sync Adddon.
Ma maamula mareegaha dhacdooyinka goobta badan? Waad ku mahadsan tahay Multisite Event Sync Addon, waxaad si fudud ula jaan qaadi kartaa dhacdooyinka kaabadahaaga mareegaha ugu muhiimsan. Marka aad doorato kaabayaasha la isku waafajinayo guddiga maamulkaaga, isbedel kasta oo lagu sameeyo mareegaha ugu weyn waxaa dhaxla kaabayaasha.
Isticmaalaha Dashboard Addon
Haddii aad jeclaan lahayd inaad u samayso bog gaar ah isticmaale kasta, waxaad u baahan tahay Isticmaalaha Dashboardka Addon. Bogga isticmaale ee gaarka ah wuxuu ka kooban yahay faahfaahin sida tigidhada la iibsaday, dhacdooyinka ballansan iyo wixii la mid ah. Addonku wuxuu u oggolaanayaa isticmaaleyaashaada inay ka soo galaan dhinaca hore si ay u iibsadaan tigidhada.
Waana taas. Addons-ka qaaliga ah sida qaansheegta ayaa iman doona dhawaan, taasoo la macno ah inaad leedahay astaamo badan oo aad rajaynayso.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad iibsato mid ka mid ah waxyaabaha lagu daro premium, dhamaantood waa laga heli karaa Webnus. Qiimayaashu waxay kala duwan yihiin:
Is dhexgalka WooCommerce, kaas oo kuu oggolaanaya inaad ku xidhid plugin-ka WooCommerce si aan kala go 'lahayn si aad lacag-bixinaha uga soo ururiso mareegahaaga. Addonku waa $35
Elementor Shortcode Builder, kaas oo dib kuu celin doona $35
Foom dhisaha Elementor oo ah $35
Elementor Single Builder oo ah $35
Xirmada Isku-darka Elementor-ka, oo ay ku jiraan dhammaan 3-da Elementor addons ee $79
Woo Plus Elementor Bundle (oo ka kooban 4 Elementor iyo WooCommerce addons) oo ah $99
Event API at $45 bucks - Midkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku muujiso dhacdooyinka qalabka kale ama mareegaha
Isku xidhka Dhacdada Multisite waa $35
Dashboard-ka isticmaalaha si loo abuuro bogag isticmaale oo gaar ah $35
Jadwalka Dhacdooyinka Casriga ah waa ikhtiyaar u fiican qof kasta oo raadinaya inuu abuuro dhacdooyin xirfadeed isagoon jabin dhididka ama bangiga. Plugin waa sahlan tahay in la habeeyo oo la isticmaalo, xitaa haddii ay la socoto hal milyan iyo hal sifooyin. Oo haddii aad waligaa u baahan tahay casiir dheeraad ah, waxaad haysataa nooca pro iyo sidoo kale wax-ku-kordhinta premium.
Waa kuwee plugin dhacdooyinka WordPress ee aad ugu jeceshahay? Ama ma haysaa wax su'aalo ah oo ku saabsan jadwalka dhacdooyinka casriga ah ee aan lagu daboolin hagaha dibadda? Noogu sheeg faallooyinka.
Shopping Yahoo waxay rabta in ay ka soo muuqato sahaminta ganacsiga iyada oo la adeegsanayo abaalmarinta Rakuten cashback
Isbeddellada Pinterest waxay siinayaan suuq-geynta aragtida raadinta ugu sareysa Mareykanka ee goobta